भारतले किन लगायो टिकटकमाथि प्रतिबन्ध ? – Rajmarg Online
भारतले किन लगायो टिकटकमाथि प्रतिबन्ध ?
भारत, असार १७ । चीन र भारतबीच सीमाक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएसँगै लोकप्रिय एप्स टिकटकमाथि भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
टिकटकले भने भारतीय टिकटक प्रयोगकर्ताका निजी गोपनीय तथ्याँङ्क चीन सरकारलाई उपलब्ध गराएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ ।
गान्धीले भविष्यमा समेत कुनै सरकारले प्रयोगकर्ताका विवरणका लागि अनुरोध भएमा पनि नदिइने बताउँदै टिकटकले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई सर्वाधिक महत्व दिइरहेको स्पष्ट गरे । उनले भारत सरकारले आफूलाई गोप्यताका विषयमा छलफल गर्न आमन्त्रण गरेको पनि जानकारी दिए ।
भारतमा चिनियाँ इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुका उत्पादनहरुको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। चिनियाँ मोबाइलहरु साओमी र ओप्पोले भारतको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनुमान छ । –रासस
डब्लुएचओले स्वीकार्याे ३२ देशका वैज्ञानिकको दावी– कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्न सक्ने !
विश्वकै सबैभन्दा खुंखार १० महिला डन
भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १९ हजार ७ सय पुग्यो
विदेशमा रहेका १ सय ४३ संक्रमित नेपालीकाे मृत्यु
भारतमा ८ प्रहरीको हत्या